निषेधाज्ञाका बीच बजार अनुगमन – Nepal Online Khabar
निषेधाज्ञाका बीच बजार अनुगमन
May 4, 2021 75
झापा— कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको झापामा सोमबार आकस्मिक बजार अनुगमन गरिएको छ ।
दमक नगरपालिकाको बजार अनुगमन समितिका संयोजक भीम पौडेलका अनुसार जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयसहित नगरपालिकाको टोलीले निषेधाज्ञाको समयमा हुन सक्ने मुल्यवृद्धि, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न अनुगमन गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको निर्देशनमा भएको बजार अनुगमनका क्रममा खाद्यगोदाम, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा मास्क उत्पादक कम्पनीहरूको अनुगमन गरिएको हो ।
दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको पालना गर्न व्यवसायीहरूलाई पनि आग्रह गरेको र देश गम्भीर संकटमा रहेका बेला हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न आग्रह गरेको बताए ।
घट्यो चहलपहल कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि झापामा निषेधाज्ञा लागु भएसँगै बजार र सडकमा चहल पहल घटेको छ । निषेधाज्ञाका कारण यात्रुबाहक बस फाटफुट मात्र चले । पसल पनि फाटफुट
खुला भए । कोरोनाको संक्रमणदर उच्च भएपछि नियन्त्रणका लागि झापामा आइतबार रातिदेखि निषेधाज्ञा लागु भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले वैशाख २६ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा
लागु गरेको छ । झापामा निषेधाज्ञा अवधिभर सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु भएको छ । थप एकको मृत्यु कोरोना संक्रमणका कारण झापामा थप एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ । रानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य
विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा दमक २ की ६५ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु भएको नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरियन्टका कारण यसअघि पनि दमकमा एक वृद्धको निधन भएको थियो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार सोमबार मात्र झापामा पीसीआर परीक्षणबाट १४९ र एन्टिजेन परीक्षणबाट थप २४ संक्रमित पहिचान भएका छन् । यससँगै झापामा कुल संक्रमितको संख्या ५ हजार २६० र मृतकको संख्या १३५ पुगेको छ ।
दमकमै सय जना संक्रमित दमक नगरपालिकामा मात्र सोमबारसम्ममा नयाँ भेरियन्टका एक सय जना जना संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य शाखाका कुवेर भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । तीमध्ये ९० जना सक्रिय संक्रमित छन् भने २ जनाको निधन भएको छ, ८
जना निको भएका छन् । यस्तै, दमककासंक्रमितमध्ये ८२ जना होम आइसोलेसनमा छन्, ८ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यसै गरी दमक नगरपालिकाले दमक अस्पताल मातहत रहने गरी शुरू गरेको कोभिड अस्पतालमा ५ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
Prevमेघराज पौडेल आइएफएससीको इभेन्ट्स कमिसनको सदस्यमा निर्वाचित
Nextकाठमाडौं उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञा, अब निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्नेलाई जरिवाना
अ’नुहारका दाग-धब्बा तथा बि’बिरा हटाउन चा’हनुहुन्छ ? यो उपाय अपनाउनुहो’स्
राजा देखेपछि दार्जीलिङेले भने: पूर्वजन्मको सतकर्मले साक्षात विष्णुको अवतारको दर्शन भयो
चुँडिन लागि सकेको नेकपाको एकता के जोडिएकै हो त ? यस्तो छ वास्तविकता…हेर्नुहोस!